SingForYou.net - Deih's Channel
Deih 's Channel
Last Login: 03-19-2013 22:19
၀မ်းနည်းခြင်းတစ်ဖက်မှာ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ရှိတရ်. ပျော်ရွင်ခြင်းတစ်ဖက်မှာ အိပ်မက်များလှပတရ်. သချင်းများကတော့ ၀မ်းနည်းခြင်း ပျော်ရွင်ခြင်းတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အဖော်မွန်တွေပေါ့...
*** သ ချင်း ဆို ရင်း အ မောေ ဖြေ ကြ ရ အောင်. ***
ကောင်းသောနေ့လေးပါ. SFY မှာ သချင်းလေးတွေဆိုရင်း ဘ၀အမောများဖြေဖျောက်နိုင်ကြပါစေနော်.
deyejiar on Nov 19, 2011
စစ်လေးရေ သီချင်းတွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ
os_oscar on Nov 18, 2011
lar tway par tel :)
လည်လည်လာတယ်ရှင့် စစ်လေး deih ရေ ... အဆိုကောင်း အသံကောင်းလေးမို့ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးတိုင်းက နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းပါတယ် စစ်လေးရေ ... အမြဲလည်းအားပေးနေမယ်ရှင် ... ချစ်တဲ့သီချင်းလေးတွေသီဆိုရင်း ဘဝအမောလေးတွေ ပြေနိုင်ပါစေရှင့် .....း))
maythingan on Sep 9, 2011
yellownavy on Sep 3, 2011
Hi DEIH, thanks so much for stopping by ... I also like your vocal and enjoy your songs which were sung very attractively, very much ... Have fun singing! ~~~ Yellow
apound on Sep 3, 2011
အဆိုကောင်းလွန်းလို့ ဒီအထိ လာအားပေးသွားတယ်
amrith on Aug 31, 2011
Channel ထိလာရောက်အားပေးသွားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုမှဝမ်းသာမိပါတယ်။အခုတလောမအားသေးတာနဲ့အဆိုကျဲနေတာပါ။အဆိုရောအသံပါကောင်းတဲ့မ Deihကိုနောက်ထပ်သီချင်းများများဆိုပေးပါအုံးလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့လာလည်သွားကြောင်းပါ။......Thank you so much sister......
susu23 on Aug 30, 2011
ဟီးးးးစစ် ဒိတ် ရယ်...မမဆုဆု လဲ အ လည် လာ ပြီး စစ် ရဲ့ သီ ချင်း တွေ ကို နား ထောင် သွား ပါ တယ် စစ် ရေ..ဖြောင်းးးးးးး ဟိ ယောင် လို့ .....
2travellers on Aug 24, 2011
၀ိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကျွှီ........... ကဲ.. အဆိုကောင်း.. စကေး မန်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ဆီကို.. ချီတက်လာပါတယ် ဗျာ.. အဆိုကောင်း..အသံမိုက်မှန်းတော့ ပထမ ဦးဆုံးသီချင်းကို..နားထောင် ကတည်းက..သိပါတယ.်... ဆက်ဆွဲထားမယ်နော့...း)))
Y2K on Aug 21, 2011
လာလည်သွားတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေ..အစ်ကိုလည်း လာလည်သွားတယ်နော် ..၀ါသနာတူညီမလေးနဲ့ တွေ့ဆုံရတာအလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါ့..အမြဲအားပေးလျှက်နော် ညီမလေး )))
View All Recordings of Deih